Inkonzo Yethu - Shandong Vomeiya Laser Technology Co., Ltd.
imveliso nganye wenziwe ngocoselelo, oko kuya kukwenza ube kwaneliswa. iimveliso zethu kwinkqubo yemveliso ziye ndisuke esweni ngokungqongqo, ngenxa yokuba kuphela ikunike arcade games, siya uya kuzithemba. iindleko zemveliso High kodwa amaxabiso ephantsi ngentsebenziswano yethu ixesha elide. Nawe unokuba ukhetho ezahlukeneyo kunye nexabiso zonke iintlobo zifana ethembekileyo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, musa ukuthandabuza ukubuza kuthi.
Namhlanje, Thina ngothando olukhulu nokunyaniseka ukuzalisekisa phambili iimfuno zabathengi bethu jikelele 'nomgangatho elungileyo kunye ezintsha yoyilo. Thina abathengi Wamkelekile ngokupheleleyo ezivela kulo lonke ihlabathi ukuseka ubudlelwane zoshishino ezinzileyo kwaye siyingenelo ngokufanayo, ukuba babe nekamva eliqaqambileyo kunye.
Ngeteknoloji nje undoqo, ukuphuhlisa nokuvelisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu ngokweemfuno ezahlukeneyo emarikeni. Ngesi ingqiqo, inkampani kuya kuqhubeka ukuze bavelise iimveliso kunye amaxabiso aphezulu esongezwa ngokuqhubekayo nokuphucula iimveliso, kwaye iza kunika abathengi abaninzi imveliso egqwesileyo kunye neenkonzo!